DAAWO: Wararkii ugu dambeeyey ee Jubbaland & Kulamada baarlamaanka cusub.
KISMAYO(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Jubbaland ayaa maanta dhageysan doona hadal-jeedinta musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland, waxaana musharaxiintan ay gaarayaan 4 xubnood oo ay ku jiraan qaar kamid ah guddoonkii hore ee baarlamaanka.
Ammaanka ayaa la adkeeyey, waxaana la xiray inta badan jidadka soo gala xarunta baarlamaanka, iyadoo walaac laga qabo xagga ammaanka in ay kooxaha Argagixisada ah ka faa’iideystaan isbedelada siyaasadeed ee dalka.
Wararkii u dambeeyey ee Jubbaland, waxay sheegayaan in ay halkaas goor dhaw gaari doonaan wafdi kasocda Beesha Caalamka, waxaana wafdigaas la rumeysan yahay in ay kulamo adag la yeelan doonaan dhinacyada Jubbaland.
Dagaal ka dhaca Jubbaland ayaa laga digayaa, waxaana wakiilada caalamiga ah ay cadeyn doonaan in aysan marnaba aqbali doonin in dagaal siyaasaded dhaco, taas bedelkeedana ay doonayaan in miiska wada xaajoodyada lays kugu yimaado.
Ergayga gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya James Swan wuxuu la kulmi doonaa madaxda Jubbaland, Odayaasha dhaqanka, Ururada rayidka ah iyo kooxaha Isbedel doonka ah ee ay taageerayso dawladda Soomaaliya, isagoo kala hadli doona hanaan wanaagsan oo doorasho.